Tombam-pandrosoana ho an'ny indostria kendrena mandrora eto amin'ny fireneko
Ny tanjona kendrena dia maneho ny firoboroboan'ny fitomboana haingana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy anatiny, ary tonga ny vanim-potoanan'ny fampiharana sy indostrialy marobe, ary ny vokatra manana atiny teknika ambany dia hiatrika fifaninanana mahery vaika kokoa. Orinasa mikendry kely maro no manana rafitra miovaova ary ambany ny vidin'ny famokarana, izay hahatonga ny tsena kendrena ambany dia modely mifototra amin'ny ady; ary lasibatra amin'ny tsenan'ny indostrialy avo lenta toy ny firaketana andriamby, semiconductors, ary ny herin'ny masoandro dia hitohy Manolotra fironana tarihin'ny teknolojia, mpamatsy lasibatra miaraka amin'ny haitao mandroso ao an-trano sy any ivelany dia hanana tombony tanteraka amin'ny fifaninanana, ary ny mpanamboatra fonosana dia hanana fiankinan-doha matanjaka amin'ireo mpamatsy lasibatra.
Ny tanjona kendrena dia hampiseho ny fivoarana tsy mitovy amin'ny sehatry ny fampiharana isan-karazany, ny fanovana ny vokatra ataon'ny mpanamboatra firakotra, ny fahaizan'ny famokarana kendrena mandrora dia tototry ihany, ary voafetra ny efitrano fitomboana, ireo orinasa lasibatra vahiny dia hitombo tsy tapaka, fa ny hafainganam-pandeha tsy ho haingana loatra; raha ireo orinasa kendrena eto an-toerana kosa dia eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana noho ny fitaovana famonoana fitaovana enti-manadanja avo lenta. Miaraka amin'ny fivoaran'ny vokatra mahomby, Ireo fitaovana kendrena eto an-toerana dia hanana tombony amin'ny vidiny Handresy tsena sasany ho an'ireo mpanamboatra lasibatra eto an-toerana.Ny haben'ny indostrian'ny fitehirizana andriamby dia hitombo hatrany, ny tanjona amin'ny fandraketana andriamby dia hiroborobo koa, ary ny tsena iraisam-pirenena sy anatiny dia hanana fitomboana lehibe..Ny indostria semiconductor dia mitaky fitaovana kendrena maro karazana, ny tsirairay amin'izy ireo dia ampiasaina amin'ny vola be. Matotra ny teknolojia ivelany ary matanjaka ny hery fikarohana sy fampandrosoana, ary ho eo amin'ny toerana mitarika mandritra ny fotoana lava io..Ny indostria angovo avy amin'ny masoandro dia manana tanjaka lehibe amin'ny fampandrosoana. Amin'ny manaraka 5 ny 10 taona, hatsangana ny revolisiona indostria angovo vaovao. Azo vinavinaina fa ny famokarana herinaratra photovoltaic solar dia hanana toerana lehibe amin'ny fanjifana angovo eto an-tany ato ho ato. Tsy hisolo ny loharano angovo mahazatra fotsiny izany, nefa koa lasa vatan-dehibe amin'ny famatsiana angovo eran'izao tontolo izao..Ny fitomboan'ny fitrandrahana angovo azo avy amin'ny masoandro, ny tanjona kendrena amin'ny sela solar dia hitondra fitomboana lehibe amin'ny fitomboana lehibe.
Ny fampandrosoana ny tanjona kendrena dia hanangana toe-javatra iray izay hamaritan'ny haitao sy ny serivisy fahombiazana na tsy fahombiazan'ny orinasa iray., isan-karazany ny R&Ny vokatra D sy ny vokatra miavaka maromaro dia hanana ny zony hiteny amin'ny fifaninanana amin'ny tsena., nampitombo ny habetsaky ny vola nohajaina, ary manalava ny fotoana fihodinana, izany rehetra izany dia mametraka fanamby lehibe kokoa amin'ny fampandehanana sy fitantanana ireo orinasa kendrena., ary hanana fepetra takiana ambonimbony kokoa amin'ny vokatra sy serivisy ho an'ny mpamatsy lasibatra.. Ireo mpamatsy lenta amin'ny alàlan'ny varotra mialoha sy varotra aorinan'ny varotra dia ho tian'ny mpanamboatra firakotra..
Ny fampitomboana ny tahan'ny fampiasana ny tanjon'ny sputter dia ny firoboroboan'ny tanjona kendrena ihany koa., ary andriamby maharitra miendrika peratra dia ampiasaina hananganana sahan'andriamby peratra eo ambonin'ilay fitaovana kendrena, ary ny faritra vita sokitra dia miforona eo amin'ny tampon'ny peratra amin'ny halavirana mitovy eo anelanelan'ny hazo fisaka, misy fiatraikany amin'ny hatevin'ny horonan-tsary Uniformity napetraka, ny tahan'ny fampiasana ny kendrena kendrena dia 20% fotsiny ～ 30%. Ny tanjon'ny magnetron mandroritra mandroso izay amporisihina sy ampiharina ao an-trano sy any ivelany dia fantsom-boribory boribory, izay afaka mihodina manodidina ny fivorian'ny andriamby miorina, afaka manao etch ilay faritra kendrena amin'ny 360 fiakarana, ary ny tahan'ny fampiasana kendrena dia mitovy amin'ny 80%.
Miaraka amin'ny fiakaran'ny toekarena ambany karbaona, Ny fiarovana ny angovo sy ny fiarovana ny tontolo iainana dia singa stratejika mila dinihina amin'ny fampandrosoana orinasa.. Raha ny momba ny indostria, mila tontolo famokarana mamonjy angovo sy tia tontolo iainana koa izy io. Etsy andaniny, izany dia hihaonana amin'ny filan'ny fampandrosoana ny indostria iray manontolo, ary etsy ankilany, fiantohana ihany koa amin'ny fametrahana endrika orinasa sy fandresena ny fahatokisan'ny mpanjifa..Ny ozinina mpamokatra kininina bitika kely any Chine dia tsy maintsy ovaina amin'ny fitaovana sy ny tontolon'ny asa., raha tsy izany dia tsy ho sarotra ihany ny hampivoatra amin'ny ambaratonga, fa hiatrika ny loza mety hikatona aza.
Amin'ny ankapobeny, ny indostria kendrena dia manana ho avy mamiratra. Ny fanitarana haingana ny indostrialy firakotra sy ny fanitarana haingana ny tinaky ny tsena dia tsy isalasalana fa hitondra ny fampandrosoana haingana ny tsena kendrena. Ankoatr'izay, ny sehatry ny fitaovana vaovao misy ny tanjona dia nahazo fiheverana lehibe sy fanohanana matanjaka avy amin'ny firenena..Ny fitomboan'ny fangatahana ny tsenan'ny coating ary ny fanamafisana ny fanohanan'ny firenena, vondron'orinasa kinendry dia hitombo haingana, lasa mpitondra amin'ny indostria kendrena, mitondra ny fampandrosoana ny indostria, ary mamorona tombony lehibe ara-toekarena sy sosialy
Précédent: Inona no tanjona kendrena Sputtering？
Manaraka: Fanasokajiana ireo tanjona kendrena